चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई नपुंसक बनाउने औषधी खुवाइरहेछन् ?
चीनमा श्रीमान्को धोकाबाट बच्नका लागि महिलाले नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस्तो तरिका जसबारे थाहा पाउँदा हरेक व्यक्ति जिल खान्छन् । पार्टनरले आफूलाई धोका नदिउन् र अन्य महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले आफ्ना श्रीमान्लाई औ’षधी खुवाइरहेका छन् । यो कुनै साधारण औषधी होइन, पुरुषलाई नपुंसक बनाउने औषधी हो ।
ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्लाई गोप्य तरिकाले यस्तो औषधी खुवाइरहेका छन् जसका कारण उनीहरु नपुंसकताको शिकार हुने गर्छन् ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एक लेखमार्फत् केही चिनियाँ श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्लाई गोप्य तरिकाले डायगाइलस्टीलबेस्ट्रोल खुवाइरहेको पत्ता लागेको छ । जानकारीमा उल्लेख भए अनुसार यो औषधी एक प्रकारको सिन्थेटिक एस्ट्रोजन हो जसले पुरुषलाई इ’रेक्स’नबाट रोक्ने गर्छ । चीनमा हालै यस्ता किस्सा कहानी सोसल मिडियामा निकै भायरल भएका छन् ।
वि’च्याटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार केही महिलाले अनलाइनमार्फत् औ’षधी अर्डर गरेको र गोप्य तरिकाले खानामा वा पेय पदार्थमा मिसाएर आफ्ना श्रीमान्लाई दिने गरेका छन् । यो औषधी खाएपछि केही धोकेबाज श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिन बन्द गरेको पनि बताइन्छ ।
लेखमा केही महिलाको प्रतिक्रिया पनि लिइएको छ । यसमा एक महिलाले औ’षधीलाई प्रभावकारी बताएक छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो औषधीलाई कार्सिनोजनको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
यस्तै चीनका कानूनी विशेषज्ञले यो क्रममा यदि श्रीमानलाई कुनै शारीरिक हानी भएको अवस्थामा यस्ता श्रीमतीले आपराधिक कानूनको सामना गर्न पनि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै यस्तो प्रकारको औषधी बेच्नेहरुले पनि कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँसम्म कि उनीहरुको लाइसेन्स सम्बन्धि लाइसेन्स पनि रद्द गर्न सकिन्छ । शान्तिवोटवाट
२०७८ जेष्ठ १६, आईतवार ०२:१५ गते0Minutes 114 Views
१.	हार्दिक बधाई नेपाली चेली अंशु बनिन् बेलायती सेनाको पहिलो क्याप्टेन ,
२.	हङकङका जनताले खोप लगाउन नमानेपछि, यति ठूलो अफर
३.	संसारका शक्तिशाली देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख कति तलब थाप्छन् ? थाहा पाईराखौं
४.	महेशलाई गृहमन्त्री बन्नबाट रोक्नेमा रिमाल र भट्टराईको हात, खगराजलाई राष्ट्रपतिको आशीर्वाद
५.	दीपक मनाङेले भने जोकरलाई मुख्यमन्त्री बनाएछौं
६.	एमाले नेता मेटमणी भन्छन्– बैद्यले मा’ फी माग्नुभयो, मचाहिँ माग्दिनँ
दीपक मनाङेले भने जोकरलाई मुख्यमन्त्री बनाएछौं
हङकङका जनताले खोप लगाउन नमानेपछि, यति ठूलो अफर
हार्दिक बधाई नेपाली चेली अंशु बनिन् बेलायती सेनाको पहिलो क्याप्टेन ,